Mini Master Class "Teahouse kuzo ngemibhobho iphephandaba"
Ukuze wenze ekhishini ngokunethezeka, ubheka iklasi master "Teahouse kuzo ngemibhobho iphephandaba." Ngosizo lwawo udala imininingwane ewusizo wezangaphakathi, okuzokwenza hlala ebalulekile ezimpilweni itiye-ukuphuza abathanda. Nokho le Hack kuyoba isipho esihle.
Ngaphambi ukudala indlu itiye kuzo ngemibhobho iphephandaba, ukwakha master-class lapho uzobona kamuva, kudingeka ufunde ukuthi ungenza kanjani workpiece. Izinto ezidingekayo:
Uhlomo noma ukunitha inaliti.
Indlela yokwenza imbobo:
Omunye emakhasini iphephandaba Imi zibe emapheshana elilingana 9 amasentimitha ububanzi.
Ukusonta strip ngalinye ngokuphambeneyo, ngokubeka wakhuluma ngaphakathi. Kuyadingeka ukuthi imbobo akalilahlile fomu.
Ichopho kwezibambo zesihluthulelo nge glue. Zonke promazyvat strip akudingekile. Kungenjalo, ngenxa rigidity kuyoba nzima ukuba sifake.
Yenza eziningana zalokhu amalungiselelo.
Manje tubing kungenziwa obudaywe umbala oyifunayo, kodwa Hack akubi nakakhulu uma bayihlehlise kwaze kwaqedwa wonke ukwelukwa.
Ukuze kwandiswe Wand, komunye umkhawulo tube ukuvuza glue bese ufaka enye.
Kufanele bakwazi ukwakha phansi ezinhle - lokhu kuzokwenza ufundise ikilasi labasebenza okuyinhloko. Teahouse kuzo ngemibhobho iphephandaba Kumelwe ume ngokuqinile phezu kwetafula. Ngakho kanjani phansi:
Beka ndawonye amashubhu ezintathu. Phezu kwakho kulaba abathathu futhi, kufanele uthole esiphambanweni. Ezimpambanweni zomgwaqo ukuvuza glue.
Thatha enye isiphambano esinjalo futhi unamathele kuso ngowokuqala ukuze uthole inkanyezi enamaphoyinti ayisithupha.
Thatha tube eside futhi ugoba emkhatsini, yena eligoqiwe cishe izingxenye ezintathu, elele side by side amashubhu.
Upper ohlangothini pass ngaphansi amashubhu ezintathu eziyinhloko. Futhi phansi kubo.
Eluka njengoba emgqeni wokuqala.
Khona-ke imigqa 3 eluka, edabula amashubhu ezimbili eziyinhloko.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba ukusonta ngokusebenzisa ishubhu elilodwa, uze ufike ububanzi oyifunayo.
Thatha amashubhu 16.
Kulahleni esiphambanweni izingcezu ezine, cishe unamathela ndawonye.
Thatha tube eside futhi uwasonge.
Obveyte ke omunye emaphahla lamane.
Kusukela kuqala lomzila wesithathu iyingxenye ebalulekile ngakho: weqa ngaphansi ecaleni ezine engenhla amashubhu okwalandela, bese wehlise ngakuwe. Khona-ke ujike wenze okufanayo ngakolunye uhlangothi.
irowu Okwesithathu: tube ukusebenza kuyafana esinyathelweni odlule, kuphela propletaya ngemibhobho emibili esikhundleni ezine.
Abambalwa yalezi uchungechunge siqale eluka ishubhu elilodwa esikhundleni amabili.
Qhubeka kuze ubukhulu oyifunayo.
Master Class "Teahouse kuzo ngemibhobho iphephandaba" ezifanelekile ezithakazelisa kakhulu - ukudalwa izindonga zendlu. Inqubekela:
Thatha round ukuma beka phansi. Lokhu kungaba yasebhange noma embuthanweni. Into esemqoka ukuthi kwaba kancane esingaphansi ububanzi phansi.
Ngemva eyodwa lift tube phezulu kanye ifomu, unamathisele clothespin.
On the asele imigqa ezintathu amashubhu eluka. Vele weqa tube kusukela phezulu, kusuka phansi.
Lapho usuqedile, fihla ukuphela ngezansi.
Tuck zonke izinti ababambelela promazhte glue. Lapho konke esomile, ukusika ngokucophelela ngokweqile.
Yenza izindonga, njengoba esinyathelweni sesithathu, usebenzisa aluka plain. Tea endlini, workshop ukudalwa zazo ufunda ngasinye etholwe esiyingqayizivele. Ngokwakha imigqa amaningi, usike ehhovisi ummese izikhwama kokuvula, ofanele kuwe. Ungakwazi ukuphuma ngewindi.
Weave eluka of amashubhu ezintathu futhi glue kuya Imi.
Ingabe udonga ukuze ukuphakama oyifunayo, cishe 20 emigqeni.
Qala kancane zauzhat, Criss-uwela lokuqala imiqulu emibili, imigqa embalwa ezintathu, nokunye.
Ukusebenza tube ekupheleni unamathisele ingcina, omisiwe wanquma engadingekile.
teahouse Sekukancane. Beluka amaphephandaba (yethu mini-MK iseduze ekupheleni) kuholela ukudalwa ophahleni. Okufanele ukwenze:
Ngezinye ibhokisi kusukela ngaphansi izicathulo ukubeka ephepheni, ukudweba engela okuyinto ubhekisela ukwakha uphahla. Qaphela kwalo amaphuzu amaningana, ibanga phakathi okufanele cishe isentimitha.
Faka iphuzu tube - injena.
Thatha tube ukuba ukusebenza futhi baqala ukuba sifake ke emhlabeni Racks.
Faka umumo ofanele esingunxantathu eluka ke.
Lapho ophahleni usulungile, ukususa ukuma futhi goba amashubhu nimkhiphela, Con, usike ngokweqile.
Beka endlini futhi silungise ingcina.
Master Class "itiye endlini kuzo ngemibhobho iphephandaba" phezu. It uhlala ukupenda yezandla, uma ungenzanga lokhu ngaphambili, futhi bahlobise. Ukunamathisela phezu ilebula imbobo yetiye zakho ozithandayo. Sinini master best of amasu ukwelukwa, uzokwazi ukuba izame ukuma ophahleni futhi base.
Indlela yokwenza iphepha izikhali nezingane
Isibonelo ibhola - elula futhi kulula
Openwork ukukhilosha izingelosi kanye izikimu: izithombe, incazelo
Indlela tie spokes Cardigan
Beetroot ukuvunwa yokudlela isikhathi kanye noshukela
"BystroBank": ukubuyekezwa, amakheli, Amahora okuvula, imali
"Nikeza uthando lwami": ukubuyekezwa uchungechunge
Scooter Street Magic Suzuki: ezibekiweko lobuchwepheshe, izincazelo kanye nokubuyekeza
Ernest Matskyavichyus. Ubuso TV Russian
Nini futhi kanjani wean ebeleni ingane?
Indlela yokwenza isifiso sigcwaliseke, ncamashi
Yini ngefekisi imodemu